Abakhiqizi be-pH / ORP & abahlinzeki - iChina pH / ORP Transmitter Factory
Transmitter yedijithali nezinzwa Series
Inzwa ye-pH yedijithali
Inzwa ye-Digital ORP
Inzwa Ekhethiwe ye-Digital Ion
Inzwa Yokusebenza Kwedijithali
Inzwa ye-Oxygen ye-Digital
Insalela ye-Digital Residual Chlorine
Izinzwa ezimisiwe zeDigital (Sludge Concentration) Inzwa
Inzwa ye-Digital Turbidity
I-pH / ORP / ION Series
i-pH / ORP Transmitter
Ion Transmitter / Ion Inzwa
Ukuqhuba / i-TDS / Ukuhlala kabusha / Uchungechunge Losawoti
I-Acid-base usawoti wokuhambisa usawoti
Incibilike Oxygen Series
I-Fluorescent Dissolve Oxygen Transmitter
I-Polarography ichithe i-Oxygen Transmitter
Isidluliseli se-Oxygen seMicro esincibilikisiwe
Okuqinile Okumisiwe (Sludge Concentration) / Turbidity Series
Ama-Solids amisiwe (Sludge Concentration) Transmitter
Transmitter Transmitter / Turbidity Inzwa
Uchungechunge lokuqapha amanzi olunamagciwane
Isidluliseli seChlorine Transmitter
Umthumeli we-ozone oncibilikile
Ukusebenza kanye ne-TDS nokuhlala kabusha nosawoti
Uchungechunge Lokuhlushwa kwe-Ion
Uchungechunge lwe-PH & ORP
I-Chlorine Esele kanye ne-Chlorine Dioxide ne-Ozone encibilikisiwe
Uchungechunge lwe-Turbidity & Olumisiwe Oluqinile
YONKE IMIKHIQIZO YOMKHIQIZO
Imitha eku-inthanethi ye-pH / ORP T4000
Imitha ye-Industrial on-line PH / ORP iyinsimbi yokuqapha ikhwalithi yamanzi nokulawula nge-microprocessor.
Ama-electrode we-PH noma ama-electrode we-ORP ezinhlobo ezahlukahlukene asetshenziswa kakhulu embonini yamandla, embonini ye-petrochemical, e-metallurgical electronics, embonini yezimayini, embonini yamaphepha, kwezobunjiniyela bokuvutshelwa kwemvelo, umuthi, ukudla nesiphuzo, ukwelashwa kwamanzi ezemvelo, i-aquaculture, ezolimo zesimanje, njll.
Imitha eku-inthanethi ye-pH / ORP T6000
CS2768 ORP i-electrode
Idizayini yebhuloho likasawoti eliphindwe kabili, isikhombimsebenzisi esibekiwe sesendlalelo esiphindwe kabili, esimelana nendawo esezingeni eliphakathi nendawo.
✬I-electrode hole hole parameter electrode iphuma kusixhumi esibonakalayo, okungelula ukuthi ivinjwe.
Ukwakhiwa kwesibani segilasi enamandla amakhulu, ukubukeka kwengilazi kunamandla.
BulAmabhalbhu amakhulu wokuzwa akhulisa ikhono lokuzwa ama-hydrogen ions, futhi asebenza kahle endaweni eyinkimbinkimbi.
PPI-electrode material i-PP inokuphikisana nomthelela omkhulu, amandla womshini nobulukhuni, ukumelana nezinhlobonhlobo zamakhemikhali awuketshezi kanye ne-acid ne-alkali corrosion.
Ngamandla okulwa nokuphazamiseka okuqinile, ukuzinza okuphezulu nebanga elide lokudlulisa. Abukho ubuthi ngaphansi kwemvelo yamakhemikhali eyinkimbinkimbi.
CS2543 ORP Inzwa
Idizayinelwe ikhwalithi ejwayelekile yamanzi.
Idizayini yebhuloho likasawoti ophindwe kabili, isikhombimsebenzisi esibonakalayo sesendlalelo esiphindwe kabili, esimelana nendawo esezingeni eliphakathi nendawo.
I-ceramic pore parameter electrode iphuma esibonakalayo futhi akulula ukuvinjelwa, efanelekile ukuqapha imithombo yezindaba ejwayelekile yekhwalithi yamanzi.
Idizayini enkulu yesibani seglasi, ukubukeka kwengilazi kunamandla.
I-electrode isebenzisa ikhebuli yomsindo ophansi, okukhipha isignali kukude futhi kuzinze ngokwengeziwe
Ama-bulb omkhulu wokuzwa akhulisa ikhono lokuzwa ama-hydrogen ions, futhi enza kahle kwimidiya ejwayelekile yekhwalithi yamanzi yemvelo.
CS2700 ORP Inzwa
CS2701 ORP electrode
CS2733 ORP Inzwa
CS2668 ORP Inzwa
Idizayinelwe imvelo ye-Hydrofluoric acid.
I-electrode yenziwa nge-ultra-bottom impedance-sensitive glass film, futhi ibuye ibe nezimpawu zokuphendula okusheshayo, ukulinganisa okunembile, ukuzinza okuhle, futhi akulula ukwenza i-hydrolyze esimweni semidiya yemvelo ye-hydrofluoric acid. Isistimu ye-electrode eyisithenjwa iyisistimu yesethenjwa engeyona impophoma, eqinile, engashintshisani. Gwema ngokuphelele izinkinga ezahlukahlukene ezibangelwa ukushintshaniswa nokuvalwa komgwaqo oketshezi, njenge-elektrode ye-reference kulula ukungcoliswa, ireferensi yokufakelwa ubuthi, ukulahleka kwesethenjwa nezinye izinkinga.
Imitha eku-inthanethi ye-pH / ORP T6500
Inani le-pH (acid, alkalinity), i-ORP (i-oxidation, ukunciphisa amandla) nenani lokushisa kwesisombululo se-aqueous lalihlolwe ngokuqhubekayo futhi lilawulwa.
CS1668 Plastic Ezezindlu pH Inzwa
Idizayinelwe uketshezi olubonakalayo, imvelo yamaprotheni, i-silicate, i-chromate, i-cyanide, i-NaOH, amanzi olwandle, i-brine, i-petrochemical, uketshezi lwegesi yemvelo, imvelo enengcindezi enkulu.
CS1768 Plastic Ezezindlu pH Inzwa
CS1500 Glass Ezezindlu pH Inzwa
Ikheli Isakhiwo 6, No.166 Mindong Road, iPudong New District, Shanghai, China 201209
Ucingo +86 21 61621082
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma pricelist, sicela ushiye kithi futhi sizoxhumana namahora angu-24.
Inzwa Yokusebenza Kwenethiwekhi yeTitanium, Inzwa yeChlorophyll, Inzwa yokuqhuba ye-TDS, Ph Inzwa electrode, Inzwa Yokusebenza Kwe-Electromagnetic, Isizweli sokusebenza se-Quadrupole Graphite,